Jean Eric Rakotoarisoa : Hanaiky hala-bato? -
AccueilRaharaham-pirenenaJean Eric Rakotoarisoa : Hanaiky hala-bato?
31/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Eny am-pelatanan’ny HCC ny baolina taorian’iny famoahana voka-pifidianana vonjy maika nihazakazahan’ny CENI fatratra iny. Voaporofo ary tsy azon’iza lavina intsony anefa ny hosoka faobe nanerana ny Nosy nandritra iny fihodinana faharoa iny…
Nanampin-tsofina sy maso nanoloana ireo hosoka sy fampiasana hosok ary hala-bato nanerana ny Faritany enina ny CENI ka nihazakazaka namoaka ilay voka-pifidianana vonjy maika mba hanimpazana ny baolina haingana any amin’ny HCC. Fihetsika feno hakanosana tokoa no nataon’ny CENI nanoloana ireo fitarainana sy fitoriana maro napetrak’ireo mpomba ny kandidà Marc Ravalomanana. Tomponandraikitra feno tamin’iny hosoka sy hala-bato iny tokoa mantsy ny CENI raha tsy hiresaka fotsiny afatsy ny tsy fisian’ny nomerao ahafahana manara-maso ireo bileta araka ny voalazan’ny andiny faha-20 ao amin’ny lalàna 2018-008. Maika hangatsiaka noho ny zavatra nataony ny CENI ka ny nanimpy izany haingana tany amin’ny HCC no laharam-pahamehana fa tsy ny tombotsoa ambonin’ny firenena velively. Raha tsy nisy ny fangatahana fampitahana nataon’ny K25 izany dia lasan’ny kandidà faha-13 ny vato ho an’ny kandidà faha-25. Ohatra iray tao anatin’ny arivo ny zava-nitranga tetsy Analamahitsy izay nomoramorain’ny CENI fotsiny hoe fahadisoana ara-teknika. Natsahatry ny CENi haingana io fampitahana nangatahan’ny K25 io satria nanomboka vaky bantsilana ny hosoka sy fampiasana hosoka tamin’ny endriny maro nandritra ny fihodinana faharoa. Nanambara moa ny filohan’ny CENI nandritra ny famoahana voka-pifidianana vonjy maika farany teo fa tsy tokony hisy krizy ary tsy mendrika izany intsony i Madagasikara kanefa ny tenany izao no fototry ny mety hisian’ny krizy dia ny fanaovana tsinontsinona ny fitakiana ny marina tamin’iny fifidianana iny, ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fanomanana ny bileta, sns.
Mitodika any amin’ny HCC sy ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa indray izany izao ny masom-bahoaka. Tsy azo antoka mihitsy ity filohan’ny HCC ity nandritra izay fotoana nitantanany ity andrim-panjakana ity, ny SEFAFI aza dia nanankiana mafy ireo fanapahan-kevitra noraisin’ny HCC nanomboka ny taona 2014.
Eo am-pelatanan’i Jean Eric Rakotoarisoa ny ho avin’ny firenena. Tokony ho fantany anefa izao zavatra manaraka izao: nahavita “nandrodana fanjakana” fanjakana lanim-bahoaka ny hetsiky ny depiote 73 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 May izay niaraha-nahita fa tsy nahazaka vahoaka hatramin’ny farany. Porofon’izany ny fametraham-pialan’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny fifidianana filoham-pirenena mialohan’ny fotoana tokony hanatanterahana izany araka ny voalazan’ny lalam-panorenana. Ankatoky ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao ny hetsika tetsy amin’ny 13 May ny sabotsy lasa teo, izany hoe, mbola variana manomana fety ny ankamaroan’ny olona kanefa ireny vahoaka maro an’isa ireny sahady no tonga namaly ny antso fitakiana ny marina sy ny ady amin’ny hosoka.
Midika izany fa mitempo any am-pon’ny vahoaka any tokoa ity hosoka sy hala-bato nandritra ny fihodinana faharoa ity ary ho avy hanatevin-daharanany hetsika fitakiana ireo olom-pirenena aorian’ny fetin’ny taom-baovao. Raha hetsika fanoherana ny kolikoly momba ilay lalam-pifidianana no nataon’ireo depiote 73 ny faha-21 Aprily 2018 dia hetsika ho fanoherana ny hosoka sy ny fampiasana hosoka ary hala-bato kosa ny etsy amin’ny kianjan’ny 13 May amin’izao fotoana.
Tsy atoro fa mahalala tsara ny tantara teto amin’ny firenena ary azo ambara mihitsy aza hoe vavolombelon’ny zava-nitranga nandritra ireny hetsi-bahoaka rehetra teto ireny ny filohan’ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa. Mpikambana tao amin’ny SEFAFI rahateo koa ny tenany tany aloha, izany hoe, mahafantatra tsara izany antsoina hoe fitakiam-bahoaka izany koa heverina fa tsy handray fanapahan-kevitra tsy matotra na koa tsy voadinika tsara manoloana ity fanoherana ny hosoka sy fampiasana hosoka ary hala-bato ity.
Efa fantatra mantsy ilay fomba fanao mamohehitra teto hatramin’izay: mody hisy biraom-pifidianana ho foanana kanefa tsy hanova ny vokatra ankapobeny mba hamitahana ny saim-bahoaka hoe niasa ny HCC; toraka izany koa ny filazana fa tsy mitombona ny fitoriana any amin’ireo biraom-pifidianana tena nampandresy kandidà iray na dia mibaribary izao aza ny hosoka sy ny hala-bato, sns. Hotsarain’ny tantara amin’izay fanapahan-kevitra hoarisiny araka izany ny filohan’ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa.